DOWNLOAD PROSHOW PRODUCER 10 N'ASỤSỤ RUSSIAN ZURU OKE MAKA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
Mgbe ụfọdụ, anyị anaghị arụ ọrụ n'ime usoro ihe omume. O yiri ka ọ bụ naanị uru ịgbakwunye ntakịrị ọrụ ma dị nro ga-adịkwu mfe ma nwekwuo obi ụtọ. Otú ọ dị, a ghaghị ịghọta na ọ dị mkpa ịnọgide na-enwe nguzozi, na-ahapụ naanị ọrụ ndị bara ezigbo uru ma dị mma. N'ụzọ dị mwute, ụfọdụ ndị mmepe chefuo nke a. Ihe atụ nke nke a bu Onye Nweputa Ihe.
Mba, usoro ihe omume ahụ adịghị njọ. O nwere ọrụ magburu onwe ya nke na-enye gị ohere ịmepụta ngosi ngosi ngosi dị oke elu. Nanị nsogbu bụ interface, nke siri ike ịkpọ oku. Na nke a, ụfọdụ ọrụ nwere ike ịfe site na onye ọrụ. Otú ọ dị, ka anyị ghara ime mkpebi ngwa ngwa ma lee anya na mmemme ahụ.
Tinye foto na vidiyo
Nke mbụ, ihe ngosi slideshow chọrọ ihe - foto na ndekọ vidio. Ma ndị na ndị ọzọ na-enweghị nsogbu na-akwado nkwado anyị. A na-agbakwụnye faịlụ site na onye nyochaa-arụ ọrụ, nke dị mfe. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'uche na eziokwu ahụ bụ Proshow Producer, dị ka ọ dị na ya, abụghị enyi na enyi na Cyrillic mkpụrụedemede, ya mere enwere ike igosi nchekwa gị dị ka nseta ihuenyo n'elu. A naghị ahụ nsogbu ndị ọzọ - a na-akwado usoro niile dị mkpa, a pụkwara ibelata ihe ngosi ahụ mgbe ị gbakwunyere.
Nke a bụ n'ezie ihe ị na-atụghị anya ịhụ n'ụdị usoro a. N'ezie, n'ụdị ọkwa, anyị nwere ohere dị mfe iji tinye ọtụtụ foto na 1 slide. Ọzọkwa, onye ọ bụla n'ime ha nwere ike ịkwaga na ihu ma ọ bụ n'azụ, dezie (lee n'okpuru), ma gbanwee ogo na ebe.
Akpadoro ihe eji edeputa ihe ndi ozo n'usoro ihe a ga-enwe obi uto site na onye nchịkọta ihe di mfe. Enwere mgbazi agba agba, nke na-anọchite anya sliders, ìhè, ọdịiche, saturation, wdg, na mmetụta. Dịka ọmụmaatụ, vignette na blur. A na-edozi ogo ha n'ọtụtụ dịgasị iche iche, nke na-enye gị ohere ịmegharị foto n'ụzọ ziri ezi n'usoro ihe omume ahụ. Anyị kwesịkwara ịkọwapụta na o nwere ike ịgbanwuo foto ahụ. Ma nke a abughi ihe dị mfe, ma ntụgharị uche zuru oke nke ọdịdị, na-emepụta mmetụta nke 3D. Jikọtara ya na ntụrụndụ a họọrọ (nke, n'ụzọ, dịkwa ka ndebiri), ọ na-eme ka ọ dị ezigbo mma.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ederede na slide show, Proshow Producer bụ nhọrọ gị. E nwere n'ezie otu nnukwu nke usoro. N'ezie, nke a bụ, nke mbụ, ụdị edemede, ụcha, agba, àgwà na nhazi. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ oge na-adọrọ mmasị, dị ka nghọta, ntụgharị nke ihe odide niile na mkpụrụ akwụkwọ ọ bụla iche, mkpụrụedemede akwụkwọ, luminosity na onyinyo. Enwere ike ịhazi mpaghara ọ bụla kpọmkwem. N'ikpeazụ, ọ dịghị ihe ga-eme mkpesa.
Ọzọkwa, usoro ihe omume ahụ kwesịrị otuto. Dị ka ị ghọtararịrị, ịnwere ike ịgbakwunye ụda vidiyo ebe a, n'ezie. Ma ị nwere ike mbubata ọtụtụ ihe ndekọ n'otu oge. N'ihe dịka ntọala ole na ole, ma ha mere nke ọma. Nke a bu ugbua na-akwusi egwu, ma kwadoro maka Fade na ma gbasaa ihe ngosi. N'ụzọ dị iche, m ga-achọ ịdeba na n'oge igodo egwu vidiyo, ụda olu ahụ na-ebelata obere, ma jiri nwayọọ nwayọọ laghachi na nke mbụ ya mgbe ọ gbasịrị foto.
N'ezie, ị na-echeta na n'ime Microsoft PowerPoint, e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndebiri nke ị nwere ike ịmepụta oge ụfọdụ nke ngosi. Ya mere, dike anyị na-enweghị nsogbu na-enye nnukwu a site na ọnụ ọgụgụ ndebiri. Enwere 453 n'ime ha ebe a! Enwere m obi ụtọ na ha niile na-ekewa n'ime edemede ndị dị na ya, dịka "Mkpụrụ osisi" na "3D".
Njikere ịnụ ọbụna ọnụọgụgụ ndị ọzọ? 514 (!) Mmetụta nke ịgbanwe agbanwe slide. Chee echiche banyere oge ole ihe ngosi mmịfe ahụ nwere ike gbanwee na-enweghị otu ugboro ịmegharị ihe ngosi ahụ. Ịbanye na ụdị a niile agaghị esiri ike, ma ndị mmepe ahụ ji nlezianya gbasasịa ihe niile dị na ngalaba, tinyekwara "ọkacha mmasị" ebe ị nwere ike itinye mgbasa kachasị amasị gị.
* Ọrụ dị mma
* Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndebiri na mmetụta
* Enweghị asụsụ Russian
* Nnyocha dị mgbagwoju anya
* Nnukwu mmiri dị na slide ngosi ikpeazụ na mbipụta ikpe
Ya mere, Onye na-emepụta ihe bụ usoro ihe omume nke ị nwere ike ịmepụta ihe ngosi ncha mara mma. Nanị nsogbu bụ na ị ga - eji ya mee ihe ruo ogologo oge site na njirimara na-adịghị njọ ma ọ bụghị mgbe niile.
Download Ntuziaka Na-eweta Nsipụta Ụgwọ
Mmemme maka ịmepụta slide egosi Software maka ịmepụta vidiyo site na foto Movavi SlideShow Okike Ihe ngosi ihe ngosi nke di elu
Onye na-enye ihe ọmụma bụ ihe ntanetịime ngosi na mmemme dị mfe.
Onye Mmepụta: Photodex Corporation
Ọnụ: $ 250